गर्मी मौसममा अनुहारको स्याहार कसरी गर्ने ? अपनाउनुहोस् यी तरिका - Birgunj Sanjalगर्मी मौसममा अनुहारको स्याहार कसरी गर्ने ? अपनाउनुहोस् यी तरिका - Birgunj Sanjalगर्मी मौसममा अनुहारको स्याहार कसरी गर्ने ? अपनाउनुहोस् यी तरिका - Birgunj Sanjal
१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार २३:३६
बिरगंज । विशेषगरी गर्मीको मौसम पसिनाले गर्दा तपाईले जति मेकअप गरे पनि त्यसको खासै उपयोगिता हुदैन । त्यसैलाई मध्यनजर गरी मेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि म्याट प्रयोग गर्नुपर्छ । सामान्यत आइलाइनर, गाजल, सनक्रिम, फाउन्डेसन तथा लिपिस्टिक प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले यतिबेला तल उल्लेख गरिएका कुरामा मात्र विशेष ध्यान पुर्‍याउन सके तपाईको सौन्दर्यमा निखार आउछ ।